Konke odinga ukukwazi ngemidlalo ngeBetway Live Games
Sponsored Content | April 13, 2021
Ungabungenela kanjani ubumnandi bemidlalo ye-Betway Live Games uphinde futhi udlale imidlalo bukhoma kwi-Betway?
Imidlalo ebukhoma iyisengezo esimnandi ku-Betway iqukethe imidlalo ehlukene yokuzijabulisa edlalwa bukhoma estudiyo esingajatshulelwa ngaphandle kokushiya ikhaya lakho. Kunemidlalo yamakhadi eyahlukene eyaziwayo njenge-Poker neBlackjack, njalo, njalo. Inezinhlobo zemidlalo ethandwa kakhulu ikakhulukazi imidlalo efana ne-Deal noma ino-Deal ne-Monopoly. Uzokwazi futhi ukudlala imidlalo yetafula yakudala efana neRoulette kanye neCraps. Le midlalo ingadlalwa komakhalekhukhwini abenzelwe ukusebenzisa ubuchwepheshe benkathi yamanje (smartphones), ukuthi kubelula ukuyidlala noma ukephi; ungayidlala usohambeni noma uhlezi ekhaya. IBetway iyatholakala ngalezi zilimi zilandelayo: isiZulu, iSesotho kanye nangesiXhosa. Le App. yakwaBet-way iyindlela enhle yokukwazi ukubona imidlalo yebhola likanobhujuzwayo ezayo kanye nesidlulile iphinde ukusize ukuthola imiphumela yemidlalo esidlulile yebhola kanti futhi ungaphide uthole izibuyekezo zokukhushulwa kwakamuva.
Nazi izindlela zokungena kwi-Bet-way APP.
-Kunezindlela ezahlukahlukene zokubhalisela I akhawunti ye Betway live games. Uma ufuna ukudlala imidlalo ebukhoma ngesiphequluli esiku-laptop yakho noma kwikhompyutha yakho vakashela ikhasi le-betway.co.za bese uqhafaza okusithonjana se-Sign Up ekhoneni eliphezulu kwesokudla ukudala i-akhawunti.
- okulandelayo izocela imininingwane efana nenombolo yocingo, ikheli le-imeyili, igama nesibongo (njengoba zivela kumazisi wakho) futhi kuzodingeka ukuthi wenze ne-password ye-akhawunti. Ukubhalisa i-akhawunti komakhalekhukhwini bengankathi yamanje (smart phones) kufana nokubhalisa usebenzisa iLaptop noma ikhumpyutha. Ingxenye yesibili yenqubo yokubhalisa izobuza uhlobo lukamazisi wakho, inombolo kamazisi, usuku lokuzalwa kanye nolimi oluthandayo.
- Ingxenye yokugcina yenqubo yokubhalisa ukuvumelana nemigomo nemibandela nokuthi ungaphezulu kweminyaka esemthethweni yobudala eyishumi nesishiyagalolumbili -18.
- Uzokwazi ukwengeza imali kwi-akhawunti yakho ngemuva kokubhalisa ngempumelelo i-akhawunti. Kunezindlela eziningi zokufaka noma ukugcwalsa kwi akhawunti, kusukela ekusebenziseni ikhadi lasebhange ukwenza ama-EFTs noma ukusebenzisa ivawusha etholakala ezitolo zakwa-Checkers naseShoprite. Izindlela ezithize zokufaka imali zingathatha izinsuku ezintathu ukubonakalisa imali, ngakho ke bheka ngokucophelela ukuthi iyiphi indlela engcono kakhulu efanele wena nezidingo zakho. Ukukhipha imali kwi-akhawunti yakho ngemuva kokuthi uthole umklomelo kulula kakhulu futhi kungathatha izinsuku ezintathu zebhizinisi ukuthi ifinyelele ku-akhawunti yakho.
- Imidlalo ebukhoma ye-Betway kufanele ibhekwe njengomthombo wobumnandi kanye nokuzijabulisa. Abaphumelele bayazi ukuthi kumele bame nini futhi kufanele ngaso sonke isikhathi kube nesabelomali futhi ungalokothi weqe kumgomo okungaphezu kwamandla akho. I-Betway isekela imidlalo efanele.